Somaliya oo sheegtay inay ku daba jirto diyaarado bixin lacagtii hawada - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Somaliya oo sheegtay inay ku daba jirto diyaarado bixin lacagtii hawada
Wasiirka hawada dawlada dhexe ee Somaliya ayaa sheegay inay jiraan diyaarado farabadan oo isticmaala hawadeena oo welli aan bixin lacagtii hawada. Wasiirka ayaa sheegay inay qabsadeen shirkad ku daba jirta oo ka soo celisa lacagtaas.
Somaliya ayaa intii ay soo celisay hawada waxa ka soo galay kharash fiican oo aan welli la shaacin. Kharashaadka hawada ayaa inta badan lagu habeeyaa garoomada diyaaradaha iyo weliba bixinta mishaharka shaqaalaha.
Wasiirka oo beeniyay war beena oo lagu faafiyay baraha bulshada oo ay qoreen qolyaha fadeexada la jecel dawlada laakiin tabarta daran oo ahayd in dib loo celiyay hawadii ayuu ku tilmaamay qolyo marin habowsan.
”Shirkad ayaan qabsanay iyagu ku takhasusay arimaha noocana oo dib u soo celiya lacagtaas ayuu yiri wasiirku.